Shiinaha SPC Dabaqa 1901 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
1. Qaab dhismeedka dabaqa LVT: qaab dhismeedka gudaha ee dabaqa LVT guud ahaan waxaa ku jira lakabka rinjiga UV, lakabka iska caabida, lakabka filimka midabka iyo lakabka hoose ee LVT. Guud ahaan, lakabka salka dhexe wuxuu ka kooban yahay saddex lakab oo LVT ah. Si loo hagaajiyo xasilloonida cabbir ee dabaqa, macaamiisha ayaa u baahan doona warshadda inay ku darto mesh fiber dhalada lakabka hoose si loo yareeyo cilladaha dabaqa ee ay sababeen isbeddelada heerkulka.
1. Qaab dhismeedka dabaqa WPC: Dabaqa WPC wuxuu ka kooban yahay lakabka rinjiga, lakabka iska caabida u adkeysanaya, lakabka filimka midabka, lakabka LVT, lakabka WPC ee lakabka.
Qaabdhismeedka dabaqa SPC: waqtigan xaadirka ah, dabaqa SPC ee suuqa waxaa ku jira saddex nooc, dabaq SPC ah oo leh dabaq toosan leh, qaab dhismeedka AB oo ay weheliso LVT iyo SPC iyo dabaqa isku dhafan ee SPC oo leh qaab dhismeedka ABA Jaantuska soo socdaa wuxuu muujinayaa lakabka keliya ee qaabdhismeedka dabaqa SPC.
Xagga sare waa farqiga u dhexeeya dabaqa LVT, dabaqa WPC iyo dabaqa SPC. Saddexdaan nooc ee dabaqa ah ayaa runtii ka soo jeeda dabaqa PVC. Maaddooyinka gaarka ah awgood, saddexda nooc ee dabaqa cusub ayaa si ballaaran loo adeegsadaa marka la barbar dhigo dabaqa alwaax, waxayna caan ku yihiin suuqyada Yurub iyo Ameerika. Suuqa gudaha ayaa wali caan ku ah
Hore: Dabaqa SPC 503
Xiga: Dabaqa SPC 1902
Dabaqa SPC 1905